Tatitry ny Mpisera : Mihamampidi-doza Hatrany Ny Fiasàna Ho Amin’ny Tombontsoan’ny Daholobe · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Nathalie Descamps
Voadika ny 24 Marsa 2019 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, বাংলা, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2017)
Fihetsiketsehana tao Tailandy nanoherana ny lalàna mikasika ny heloka bevava amin'ny ‘fanivaivàna mpanjaka’ . Sary an'i Matthew Richards, Fizakàmanana @Demotix (12/10/2011)
Milaza ireo fanamby, fandresena ary fironana misongadina momba ny zo niomerika manerantany ny Tatitry ny Mpisera (Netizen Report.)
Toa mitombo manerana an'izao tontolo izao ireo zavadoza mifamatotra amin'ny asa ho an'ny tombontsoan'ny daholobe, na amin'ny maha-mpanao gazety izany, na amin'ny maha-mpikatroka na mpiaro ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitry ny governemanta.
Tamin'ny 5 Jolay 2017, natsahatry ny mpitandro filaminana Tiorka tampoka ny sehatrasa fanofanana mikasika an'ireo teknolojiam-baovao tao Istanbul ary mpiofana roa sy mpiaro ny zon'olombelona valo no voasambotra tanatin'ireo fanta-daza indrindra tao amin'ny firenena. Nogihazan'izy ireo ihany koa ny solosaina sy ny findain’-dry zareo. Tsy mbola voaheloka akory hatreto ireo voasambotra ary hotànana am-ponja mandritra ny fito andro, fotoana izay hijerena ny antontan-taratasin'izy ireo. Anisan'ireo olona voasambotra i Idil Eser, lehiben'ny Amnesty International ho an'i Tiorkia, .
Ny filohan'ny fikambanana, Taner Kilic, tetsy ankilany naverina tany amponja efa ho iray volana latsaka izao. Avy hatrany ny Amnesty International dia nanao fanambaràna tamin'ny anaran'ireo voafonja hoe:
Fanamparam-pahefana faran'izay tena goavana ny fanagadrana miafina (an'i Idil Eser) sy ireo hafa mpiaro ny zon'olombelona izay nandray anjara tamina sehatrasa fanofanana tsotra ary manoritra ny faharefoan'ireo mpikatroka ho an'ny zon'olombelona ao amin'ny firenena. Idil Eser sy ireo olona voafonja miaraka aminy dia tokony hafahana tsy misy hatak'andro ary tsy asiana fepetra.
Roa andro talohan'izay, nampaingain'ny governemanta miaramila ao Myanmar ny mpanao gazety telo tsy miankina miasa an-tambajotra, araka ny lalàna mifehy ireo fikambanana tsy ara-dalàna. Manameloka ny firotsahana amina “fikambanana tsy ara-dalàna” ity lalàna ity ary manondro sazy fanagadrana mandritra ny telo taona ho an'ireo voaheloka. Tamin'ny faran'ny volana jona, nosamborina tao amin'ny fanjakana Shan, ao avaratry ny firenena, ireo mpanao gazety ireo raha mbola teo ampanangonamna vaovao mikasika ny famokarana rongony tao amin'ny faritra ambany fanarahamason'ny tafi-panafahana nasionaly ta'ang, vondrona mitàm-piadiana avy aminà foko iray izay nifandona ara-politika efa hatry ny elabe tamin'ny governemanta federaly. Ny 11 jolay 2017 ny fitsaràna an'ireo mpanao gazety ireo.
Miasa ho an'ny vohikala The Irrawaddy sy ny fikambanana Democratic Voice of Burma [Ny feon'ny demokrasia ao Myanmar] ireo mpanao gazety ireo, media roa tsy miankina tsy fahita firy sahy niresaka olana politika raha toa mbola eo ambany ziogan'ny fitondrana miaramila mpanao jadona ny firenena. Mpiara-miasa amin'ny Global Voices ny gazety an-tambajotra The Irrawaddy.
Kyaw Zwa Moe, tomponandraikitry ny famoahana amin'ny teny anglisy ao amin'ny The Irrawaddy, no nanipika fa ny fisamborana ireo mpanao gazety telo dia mety hisy fiantraikany hampihemotra eo amin'ny fiarahamonina:
Ny fisamborana sy ireo fiampangana dia mampiseho fa, na tsy fantatr'ireo miaramila mpitondra ao Myanmar ny antom-pisiana sy ny tanjon'ireo media, na io hetsika voahevitra mikendry ny hanakorontanana an'ireo mhizaka tsikera.
Meksikàna mpanao politika avy amin'ny fanoherana, kendren'ireo rindrambaiko mpitsikilo
Tamin'ny volana lasa teo, nahariharin'ireo vondrona meksikana mpiaro zon'olombelona ampahibemaso ireo porofo marobe hoe nividy sy nampiasa rindrambaiko mpitsikilo avy amin'ny orinasa israeliana NSO Group ny governemantan-dry zareo mba hanaraha-maso an'ireo mpanao gazety, ireo mpikatroka ary ireo mpiaro ny zon'olombelona. Notsiahivin'ny tatitra ara-teknika vaovao iray an'ny Citizen Lab ao amin'ny Oniversiten'i Toronto fa mpanao politika telo avy amin'ny mpanohitra ihany koa no nokendrena, samy mpikambana amin'ny Antoko Nasionalin'ny Asa (PAN) avokoa ireo rehetra ireo, antoko iray tena mpifikitra amin'ny nentin-drazana sosialy. Ny filoham-pirenena Meksikana, Enrique Peña Nieto, dia namaritra ireo filazana ireo ho “diso” ary nangataka tamin'ny biraon'ny lehiben'ny mpampanoa lalàna hanao fanadihadiana. Sivy tamin'ireo olona nokendrena ireo no nametraka fiampangana manohitra ny governemanta.
Ao Venezoela, nahatratra ny faratampony ny fanivànana ireo media sosialy tao anatina zavaniseho feno korontana ara-tsosialy
Facebook, Twitter, YouTube ary Instagram, ary koa vovonana media sosialy hafa maro sasany, no nosakanana tao Venezoela [teny frantsay] ny harivan'ny 28 jona. Tamin'ny alalan'ireo ‘serveurs’ DNS [Service de noms de domaine] an'ny mpamatsy asa amin'ny Aterineto tantanan'ny Fanjakana, CANTV no nametrahana ireo sakana. Notsoahana izy ireo ny faramparan'ny harivan'ny 28 jona. Ho setrin'izany, nifanakalo trohevitra ara-teknika ireo Venezoeliàna [teny frantsay] mikasika ny fomba hialàna amin'ireo sakana, anisan'izany ny mikasika ny fomba fampiasàna an'ireo tolotra an'ireo fantsom-pifandraisana tsy miankina virtoaly maimaim-poana sy fanovàna ireo adiresy DNS. Toa manaraka trangana fanivànana hafa mitovitovy aminy ireo sakana, sahala ny fanoratana an'ireo vohikala 41 ho anatin'ny lisitra mainty tamin'ny volana May, ary mipoitra anatin'ny fotoana izay ametrahan'ireo fihetsiketsehan'ny mpanohitra fitsapàna mafy ny firenena izay efa iharan'ireo krizy ara-toekarena henjana, ara-tsakafo ary ara-pahasalamana rahateo.
Senatera filipiana iray te-handràra ireo “vaovao tsy marina”
Tamin'ny faran'ny volana jona 2017, napetraky ny senatera filipiana, Joel Villanueva, ny volavolan-dalàna iray manameloka ny “fandefasana vaovao tsy marina ho aminà tanjona ratsy”. Ilay volavolan-dalàna dia mamaritra an'ireo vaovao tsy marina ireo ho sahala “amin'ny mikatsaka ny famafazana lainga”, korontana, fizarazaràna sy mandranitra herisetra ary fankahalàna, na ireo izay manao fampielezankevitra ho aminà tanjona fanimbàna lazan'olona iray na hanaratsiana azy”. Hita ao anatin'ilay volavolan-dalàna ny fepetra mirakitra ireo sazy henjana fanagadrana ho an'ireo izay mamoaka “vaovao tsy marina”, saingy ihany koa ho an'ireo izay mizara izany, mety hanameloka ireo mpampiasa media sosialy tsy dia mahalala loatra akory ny mety ho ateraky ny fizaràna tsotra ny lahatsoratra iray amin'ireo namany.
Ao Espàna, mampidi-bola betsaka ho an'ny Fanjakana ny “lalàna fanapenam-bava ‘bâillon'”
Roa taona katroka izao no manankery sy mihatra ao Espaina ilay lalàna mampiady hevitra mikasika ny fiarovana olom-pirenena, antsoina amin'ny ankapobeny hoe “lalàna manampim-bava” (“Ley mordaza” amin'ny teny espanola). Mametra ireo fahafahana maneho hevitra sy mivory io lalàna io ary, miaraka amin'ireo fanavaozany ny Fehezandalàna Famaizana, dia mitaky onitra mavesatra ho an'ireo hadisoana isan-karazany izy, izay tsy inona fa ny fandefasana sary na lahatsary mampiseho mpitandro filaminana, “ny tsy fisiana fanajàna” an'ireo mpitandro filaminana, ny fampiasana an'ireo media sosialy [teny espanola] mba hikarakarana hetsika iray, ary ny fandraisana anjara amin'ireo fihetsiketsehana “tsy nahazoana alalàna”. Nandritra ireo volana 18 nanaraka ny fankatoavana azy, manodidina ny 286.000 ireo lamandy nampiharin'ny Fanjakana Espanola ary nahazoany [teny espanola] maherin'ny 131 tapitrisa Euros. Na dia nizarazara aza ny Parlemantera Espanola, andalana ny finiavana mba hanavaozana ilay lalàna, saingy ampoizin’ireo mpikatroka [teny espanola] sy ireo manampahaizana [teny espanola] fa tsy ampy hiarovana ny fahalalahana maneho hevitra ireo fanavaozana natolotra.
Milaza hevitra mankasitraka fanarabiana ny fitsaràna breziliana
Tao anatina fanapahankevitra manantantara, ny Fitsaràna ambony ao Brezila dia namoaka didy nanome rariny [teny frantsay] ny vohikala mpanaraby Falha de Sao Paulo [pt], sady mamarana ny ady ara-pitsaràna fito taona. Mba ho enti-maneso, nalain'ilay vohikala tàhaka ny anarana sy ny vontoatin'ny gazety Folha de S. Paulo. Kilalaonteny amin'ireo teny folha (“taratasy” amin'ny teny portiogaly) ny lohateny ary falha (“tsy fahombiazana”). Noforonina izy io mba hisarihana saina ho amin'ny fandrakofana lazaina fa mitanila nataon'ny Folha tamin'ireo fifidianana breziliana tamin'ny taona 2010. Ny fianakaviana Frias, tompon'ny Folha de S. Paulo, no nampiantso vadintany, 17 andro taorian'ny fampandehanana an-tambajotra ilay vohikala, niteraka ady naharitra teny amin'ny fitsaràna mikasika ny zo fakàna tàhaka manoloana ny lalàna brezialiana mikasika ny zon'ny mpamorona. Ny niafaràny, namoaka didy ny Fitsaràna fa ny vontoatin-dalàna mikasika an'ireo ‘brevets’ dia manome alalana ny fankan-tàhaka ary nanaiky ny zo amin'ny famazivaziana sy ny fanalàna andro. Tsy mbola nanapa-kevitra ireo mpamorona ny vohikala na hamerina ny Falha ho ety anaty tambajotra na tsia.
The Shifting Landscape of Global Internet Censorship (teny anglisy) – The Internet Monitor
Fandriho amin'ny imailaka ny Tatitry ny Mpisera
Ellery Roberts Biddle, L. Finch, Mong Palatino, Elizabeth Rivera ary Sarah Myers West no nandray anjara tamin'ny fandrafetana an'ity tatitra ity.